မြန်မာ့အလှ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label မြန်မာ့အလှ. Show all posts
ပြင်ဦးလွင်က ငြိမ်းအေးလှပတဲ့ ရေတံခွန် ၇ ခု
နွေရာသီမှာ အပူရှောင် ခရီးထွက်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာ၊ ရာသီဥတု အေးအေး ချမ်းချမ်းနဲ့ လည်ပတ်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာဟာ ပန်းပေါင်းစုံ ပွင့်ပြီး ရေတံခွန် များစွာ ရှိရာ ပြင်ဦးလွင် တောင်ပေါ် စခန်းမြို့ပါ။
ရေမြေ တောတောင် သဘာဝ ရှုခင်းတွေ၊ စိမ်းလန်းတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ အရောင်သွေး စုံတဲ့ ပန်းပင်တွေနဲ့ လှပပြီး အေးချမ်းတဲ့ စိမ့်စမ်း ရေတံခွန်တွေ ပေါများတဲ့ အရပ် ဒေသ၊ ပြင်ဦးလွင် မြို့မှာ လည်ပတ် စရာ နေရာတွေ ပေါများ ပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်မှာ ရှိတဲ့ ရေတံခွန် များစွာ ထဲက သွားလည် သင့်တဲ့ ရေတံခွန် ၇ ခုကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
(၁) ဓာတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန်
ဓာတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန် (Facebook)
ဓာတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန်က ပြင်ဦးလွင်မြို့ (မန္တလေးဘက်မှ) အဝင် အနီးစခန်း ကျေးရွာမှာ တည်ရှိပြီး ပြင်ဦးလွင်မြို့နဲ့ ၇ မိုင်ခန့် ကွာပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ ရေတံခွန် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရေမြေ သဘာဝ ရှုခင်းတွေ စိမ်းလန်းလှပပြီး တောလမ်းခရီးကနေ အောက်ခြေရေတံခွန် ရောက်တဲ့ အထိ ပေ ၁၀၀၀ ကျော် ဆင်းသွားရပါတယ်။
လမ်းခရီးက အနည်းငယ် ကြမ်းပေမယ့် လှပတဲ့ ရေတံခွန် ရှုခင်းကြောင့် လမ်းခရီးတလျှောက် ပင်ပန်း သမျှတွေ အားလုံး သဘာဝ ရေအေးအေးနဲ့ အတွေ့မှာ ပြေပျောက် သွားစေမှာပါ။ ဓာတ်တော်ချိုင့် ရေတံခွန်ကို ပွဲတော်ရက်တွေနဲ့ ခရီးသွား ရာသီတွေမှာ လာရောက် လည်ပတ်သူ များပြားလျက် ရှိပါတယ်။
(၂) ပွဲကောက် ရေတံခွန်
ပွဲကောက် ရေတံခွန် (Facebook)
ပွဲကောက် ရေတံခွန်က ပြင်ဦးလွင်မြို့ အရှေ့ဘက်၊ မဟာအံ့ထူးကံသာ ဘုရားကြီး မြောက်ဘက်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ရေတံခွန်အဆင်း ကားလမ်းက အနည်းငယ် မက်စောက်ပေမယ့် မြို့ထဲကနေ သွားလာရ လွယ်ကူတာကြောင့် ပွဲတော် ရက်တွေမှာ လာရောက် လည်ပတ်သူ များပြားပါတယ်။
ပွဲကောက်ရေတံခွန် ဈေးဆိုင်တန်းမှာ ပြင်ဦးလွင် ဒေသထွက် မက်မန်းဝိုင်၊ စတော်ဘယ်ရီဝိုင်နဲ့ ဒေသထွက် အစားအစာများ၊ လက်ဆောင်များ၊ ပန်းပင်နဲ့ တခြား ပျိုးပင်ငယ်များ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(၃) နတ်ကျုံး ရေတံခွန် (ရန်ကုန်ကျောင်း)
နတ်ကျုံး ရေတံခွန် (ဇော်ဇော်/ ဧရာဝတီ)
နတ်ကျုံး ရေတံခွန်ကတော့ ပွဲကောက်ရေတံခွန် အလွန်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ပြင် (လားရှိုးဘက် အထွက်) ဒီဇင်ဘာနွားနို့ခြံနဲ့ တိုးဂိတ် အနီးက “ရန်ကုန်ကျောင်း” ဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်း အတွင်းမှာ တည်ရှိတာပါ။ နတ်ကျုံး ရေတံခွန်ကို ရန်ကုန်ကျောင်း ရေတံခွန်လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေ အုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ တောရကျောင်းအတွင်းမှာ တည်ရှိတဲ့ အဆိုပါ ရေတံခွန်ဟာ နတ်ကြီးတယ် လို့ အယူအဆ ရှိကြပြီး လာရောက် လည်ပတ်သူများကလည်း စည်းကမ်းတကျနဲ့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် လာရောက် လည်ပတ် ကြပါတယ်။
(၄) ဒီဇင်ဘာခြံ ရေတံခွန်
ဒီဇင်ဘာခြံ ရေတံခွန်ကတော့ လူသိများလာတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး။ Social Media “Facebook” မှာ ဓာတ်ပုံရိုက် တင်လိုက်လို့ ဒီဇင်ဘာခြံ ရှုခင်းတွေက အခုဆိုရင် လည်ပတ်စရာ နေရာသစ်တခု တိုးလာပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာခြံ ရေတံခွန်က ဒီဇင်ဘာနွားနို့ခြံ အနောက်ဘက်မှာ တည်ရှိတာပါ။
ချစ်စရာကောင်းပြီး လှပတဲ့ လျှောက်လမ်းလေး အတိုင်း လျှောက်သွားမယ် ဆိုရင် မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်း၊ အပင်စိမ်းစိမ်း တွေနဲ့ ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ရှုခင်းကနေ ရေတွေ တဖွားဖွားကျနေတဲ့ ရေတံခွန်ကို ရောက်ပါတယ်။ သီးခြား ကမ္ဘာငယ်တခု ရောက်သွားသလို လှပတဲ့ ဒီဇင်ဘာခြံ ရေတံခွန်က လူငယ်တွေ အကြိုက် လည်ပတ်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာသစ် တခုပါ။
(၅) ပိတ်ချင်းမြှောင် (ဝက်ဝံ ရေတံခွန်)
ပိတ်ချင်းမြှောင် လိုဏ်ဂူက ပြင်ဦးလွင်မြို့ (လားရှိုးဘက်) အထွက် ၁၂ မိုင်အကွာ၊ ဝက်ဝံကျေးရွာမှာ တည်ရှိတာပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်တာကြောင့် ရှေးယခင်တည်းက နှစ်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိခဲ့တဲ့ ပိတ်ချင်းမြှောင် မဟာနန္ဒမူ လိုဏ်ဂူတော်ကို နှစ်စဉ် ရာသီမရွေး လာရောက်လည်ပတ်သူ များပြားပါတယ်။
လိုဏ်ဂူ အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ကျောက်စက်ပန်းဆွဲတွေ၊ ဂူအတွင်း စီးဆင်းနေတဲ့ သဘာဝ စိမ့်စမ်းရေတို့နဲ့ ထူးခြား ဆန်းပြားတဲ့ ပိတ်ချင်းမြှောင် လိုဏ်ဂူအနီးမှာ မြင့်မားလှတဲ့ ရေမြေတောတောင် ရှုခင်းတွေနဲ့ ရေတံခွန်တွေ ရှိပါတယ်။ လိုဏ်ဂူ အနီးမှာ ရှိတဲ့ ရေတံခွန်ငယ်တွေနဲ့ ဝက်ဝံ ရေတံခွန်ကို သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်။
(၆) ရေပျံတောင် ရေတံခွန်
ရေပျံတောင် ရေတံခွန် (Facebook)
ရေပျံတောင် ရေတံခွန်ကတော့ ပြင်ဦးလွင် အမျိုးသားကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်ရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် ၅ မိုင် အကွာ၊ ဆင်ခေါင်းလေးရွာ၊ ရွှေသင်းရွာတို့ အနီးမှာ တည်ရှိတာပါ။ ရေပျံတောင် ရေတံခွန်က ရှေးယခင် ကတည်းက ရှိတာ ဖြစ်ပေမယ့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတာကြောင့် ယခင်က အသွားအလာ နည်းပါတယ်။
ယခုအခါ “Facebook” လူမှုကွန်ရက် သတင်းတွေက တဆင့် လူသိများလာပြီး လမ်းခရီး ကြမ်းတမ်းပေမယ့် ဆိုင်ကယ် သို့မဟုတ် အကြမ်းခံတဲ့ Light Truck ကားတွေနဲ့ လာရောက် လည်ပတ်သူ များပြားလာတာလို့ သိရပါတယ်။ လမ်းတလျှောက်မှာ မြေနီလမ်း၊ ထင်းရှုးတော စတဲ့ ရှုခင်းတွေနဲ့ မက်မန်းခြံ၊ စပျစ်ခြံတို့ကို ဝင်ရောက်လေ့လာ လည်ပတ်နိုင် ပါတယ်။
(၇) ဒီးဒုတ် ရေတံခွန် (ရေပြာစမ်း)
ဒီးဒုတ် ရေတံခွန် (ရေပြာစမ်း) အင်တာနက်
ဒီးဒုတ် ရေပြာအိုင် ရေတံခွန်က မန္တလေး- ပြင်ဦးလွင်လမ်း၊ အုန်းချောရွာ ၁၆ မိုင်လမ်းခွဲကနေ ရဲရွာ (ရေအားလျှပ်စစ်ရုံ) ဘက် သွားတဲ့ လမ်းမှာ တည်ရှိတာပါ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ပြီး ယခုအခါ လမ်းတလျှောက်မှာ ၆ မိုင်၊ ၇ မိုင် အပန်းဖြေစခန်းများ ရှိတာကြောင့် လာရောက် လည်ပတ်သူ များပြားပါတယ်။
ဒီးဒုတ် ရေတံခွန်က အဆင့် ၁၀ ဆင့် ရှိပြီး အဆင့်တိုင်းမှာ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်တည်နေတဲ့ ရေကန်တွေမှာ ရေကစား နိုင်ပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးဆင့် ရေတံခွန်ထိ တက်ရတဲ့ တောလမ်းက ကျဉ်းမြောင်းပြီး လမ်းခရီး ကြမ်းတမ်းပါတယ်။ ရေမြေ တောတောင် သဘာဝရှုခင်းတွေနဲ့ လှပတဲ့ ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင် ရေတံခွန်က လည်ပတ်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတခု ပါ။
နွေရာသီမှာ အပူရှောင်ခရီးထွက်ချင်သူတွေ အတွက် ရေတံခွန်တွေ ပေါများတဲ့ တောင်ပေါ်စခန်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို ညွှန်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်ကို အလည်ရောက်ရင် သွားလာ လည်ပတ်သင့်တဲ့ ရေတံခွန်များစွာထဲက မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ရေတံခွန်တွေဆီ သွားရောက် လည်ပတ်နိုင်ဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
From : ဧရာဝတီ by သီဟတိုး
Originally published at - https://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2017/05/07/134415.html
ကဏ္ဍ ခရီးသွားလမ်းညွှန်, မြန်မာ့အလှ, အပန်းဖြေရာ
မုံရွာတစ်ခွင် ခရီးနှင်ခြင်း (မုံရွာဒေသ အကြောင်း)
ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ရပ်တော်မူ ဘုရားကြီး
TASTY TRIP: Around Monywa
မုံရွာကို ရောက်ခဲ့ရင် ဘယ်နေရာတွေကို အလည်သွား ကြမလဲ ??
မုံရွာဒေသ အနီး ပတ်ဝန်ကျင်မှ မြန်မာ့ရှေးဟောင်း အနုပညာလက်ရာများနှင့် ဘုရား စေတီ ပုထိုးများနှင့် ရင်သပ်ရှုမောစရာ သဘာဝ အလှများကို Mizzima TV မှ
ရိုက်ကူး တင်ဆက် ထားပါတယ်။
From : Mizzima TV By: TASTY TRIP
Originally published at - https://youtu.be/bFma_StnQP8
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ, မြန်မာ့ပုံရိပ်များ, မြန်မာ့အလှ
ညို့မှိုင်းတဲ့ တောင်တန်းတွေကြားက ဇလုံတောင်
၉ခန်းဇရပ် နံ့ တည်ပင်စခန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ဗန်းမောက် မြို့နယ် အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ ဇလုံတောင်က စိမ်းလန်းတဲ့ တောအုပ် ညှို့မှိုင်းတဲ့ တောင်တန်း တွေရဲ့ အလယ်မှာ ရှိနေတာပါ။ ဗန်းမောက်မြို့ရဲ့ မြောက်ဘက် ၁၄ မိုင် ၆ ဖာလုံ အကွာမှာ ရှိပြီး ဗန်းမောက် မြို့နယ် ထဲက အနီးဆုံး (ခမိုးကျေးရွာ) နဲ့ ၁၀ မိုင်ကျော် ကွာဝေး ပါတယ်။
ခမိုးရွာလွန်တာနဲ့ သစ်ကြီးဝါးကြီး လျှိုမြောင် ချိုင့်ဝှမ်းတွေနဲ့ တောညို့ညို့တောင်စိမ်းစိမ်းတွေက မြို့ပြ ခရီးသွားတွေကို ဖမ်းစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဇလုံတောင်ဟာ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် အထက် (၃၀၉၀) ပေ မြင့်မားပြီး ပြည်တွင်း ခရီးသွားတွေ အရောက် အပေါက် နည်းနေသေးတဲ့ ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မူလက သလွန်တောင်လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့ပေမယ့်ဇလုံတလုံး မှောက်ထားသလို ဖြစ်နေတာကြောင့် အခုအခါ ဇလုံတောင်လို့ အမည်တွင် လာတာပါ။
တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူး စတဲ့ ပွင့်လင်းရာသီ ကာလတွေမှာ တောင်ပေါ် အထိ ကားတွေနဲ့ တက်ရောက်နိုင် ပေမယ့် အခုလို မိုးတွင်း ကာလမှာတော့ (မိုးမရွာတဲ့
နေ့တွေမှာ) ဆိုင်ကယ် တမျိုးတည်း ကိုသာ သုံးပြီး တက်ရောက် နိုင်ပါတယ်။ မိုးရွာရင် တောင်ပေါ်လမ်းဖြစ်လို့ (လမ်းလည်း သိပ်မကောင်းလို့) မသွားသင့် ပါဘူး။
ခြေကျင်းဝတ်လောက် အထိ မြုပ်တဲ့ တောင်ကျချောင်းတွေကို ဖြတ်ကျော် ရမှာမို့ မိုးသည်းရင် ဖြတ်ဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ တောင်တက်လမ်းက မြေသား လမ်းသာဖြစ်ပြီး သဲဆန် တဲ့မြေ၊ ဂ၀ံဆန် တဲ့မြေ၊ ရွှံ့စေး ဆန်တဲ့ မြေတွေ မျိုးစုံ တွေ့ရ ပါတယ်။ တချို့နေရာတွေရဲ့ ဖို့မြေတွေက အသား မသေသေးဘူး။
ဒါ့ထက် လမ်းခရီးတလျှောက် လူနေထိုင်တဲ့ ကျေးရွာရယ်လို့ မရှိတဲ့အတွက် သွားလာတဲ့အခါမှာ မိမိ ဆိုင်ကယ် ကောင်းဖို့လိုသလို စားသောက်စရာတွေပါ ကိုယ်နဲ့ တပါတည်း ယူဆောင်သွားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
စမ်းရေစီးသံ၊ ကျေးငှက်သာရကာတွေရဲ့တေးသီသံတွေက စိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းလှတဲ့အပြင် အောက်ချင်း ငှက်၊ ဒေါင်းငှက်၊ စွန် တို့ ပျံသန်းနေကြတာဟာလည်း စိတ်ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းတခုလို ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တောပန်း၊ တောင်ပန်းရနံ့တွေကလည်း သင်းပျံ့လို့ပါ။ တောဝက်၊ ချေ၊ ဆတ်၊ ၀က်ဝံ၊ မျောက်၊ တောင်ဆိတ် စတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေ တောတွင်းမှာ ကျက်စားကြတာပါ။ ၀က်ဝံနဲ့ တောဝက်တွေက မျှစ်ပေါတဲ့ မိုးဦးကာလမှာ ကားလမ်းအနီးထိ ရောက်လာလေ့ ရှိပါတယ်။ မျောက်တွေဆိုရင် ကားလမ်းအနီးက သစ်ပင်တွေပေါ်မှာတင် အလွယ်တကူ မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ဗန်းမောက်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးပြည့်ဖြိုးငြိမ်းက “ဇလုံတောင်ဒေသကို သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်။ ဇလုံတောင်ရှိရာနေရာကိုလည်း နန့်ခေါင်ဟူး ကြိုးဝိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဧက ၅၃၀၀၀ ကျော်တယ်။ ဒီဒေသက ဆန်ရယ်၊သစ်ရယ်၊ ရွှေရယ် ထွက်တာ။ သဘာဝ အခြေခံ ခရီးသွားဖွံ့ဖြိုးရင် မြို့လူထုအတွက်လည်း အဆင်ပြေနိုင်တယ်” လို့ဆိုပါတယ်။
အခုလို မိုးတွင်းကာလမှာတော့ ဇလုံတောင်ကို သွားတဲ့သူ နည်းပါးပါတယ်။ ဇလုံတောင်က နန့်ခေါင်ဟူး သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှာ သီးသန့်တည်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲ ကန့်လန့်တောင်၊ လေသာတောင်တို့နဲ့ ဆက်စပ်တည်ရှိနေတာပါ။
တောင်တက်တောင်ဆင်းတွေက အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ “ဗီ” ပုံသဏ္ဌန်ဖြစ်ပြီး ဆင်ခြေလျှောတွေနဲ့ မက်စောက်ပါတယ်။ မိုးတွင်းကာလတွေမှာ တောင်ပြို၊ မြေပြို အန္တရာယ်
ကြုံတွေ့ ရနိုင်ပါ တယ်။ လမ်းခရီးမှာ ရေတံခွန်လေးတွေလည်း တွေ့ရနိုင် ပါတယ်။ ဗန်းမောက်မြို့တွင်းက ဆိုင်ကယ် တက္ကစီတွေနဲ့ သွားလို့ရပြီး ငှားရမ်းခက အသွား အပြန် ခရီးအတွက် ကျပ်၂၀၀၀၀ (နှစ်သောင်း) ၀န်းကျင် ကုန်ကျနိုင်တယ်။ ပွင့်လင်းရာသီမှာတော့ ဗန်းမောက်မြို့တွင်းကနေ ဇလုံတောင် အထိ လိုင်းကား နေ့စဉ်
ပွင့်လင်းရာသီတွေမှာတော့ တောလမ်းခရီးကို ခြေလျင်လျှောက်လိုသူတွေ အကြိုက်တွေ့နိုင်တယ်။ လျှိုမြောင် စိမ့်စမ်းတွေကို ဖြတ်သန်းသွားရတဲ့ ခရီးက ဘ၀အမောတွေ အထိုက် အလျှောက် ပြေလျော့စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောပန်းတောင်ပန်းတွေက စိတ်ကို လန်းဆန်း စေပါတယ်။ မိုးထိမြင့်မားတဲ့ သစ်ပင် မြင့်မြင့် ကြီးတွေနဲ့ အတူ
ထောက်ကြံ့၊ အင်ကြင်း၊ ပိတောက်၊ တမလန်း၊ သစ်ရာ၊ ကညင်၊ အင်၊ သစ်မင်းနဲ့ ၀ါးအမျိုးမျိုးတို့ ပေါက်ရောက်ပါတယ်။
ဇလုံတောင်ဒေသကို သွားတဲ့အခါ အနက်ရောင် အ၀တ်အထည်နဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ ယူသွားရင် အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံတွေ့လေ့ ရှိတယ်လို့ ဒေသ ခံတွေက ယုံကြည် ကြပါတယ်။
ခြေကျင်းဝတ်လောက်မြုပ်တဲ့ တောင်ကျချောင်းလေးတွေ အများ အပြားကို လမ်းခရီးမှာ ကျော်ဖြတ် ရပါတယ်။ လမ်းခုလတ် စမ်းချောင်း အနီးမှာ ရေကစားနေတဲ့ သစ် ထုတ်လုပ်ရေး ဆင်စခန်းက ဆင်မိသားစုကို ကြည့်ရင်း တောတွင်း သဘာဝ ဆင်တွေ နေထိုင်ပုံကို ခရီးသွား ဟန်လွှဲ လေ့လာ မိလိုက် ပါသေးတယ်။
မိုင်တိုင် အမှတ် ၁၄ ရောက်တဲ့ အခါ ပြန့်ပြူးတဲ့မြေပြင်နဲ့ တယ်ပင်မြင့်မြင့်တွေက ဆီးကြိုနေ မှာပါ။ အဲဒီ တယ်ပင် စခန်းမှာ ၀ါးတိုင်တွေကို တိုင်ထူ ထားပြီး သက်ကယ် မိုးထားတဲ့ တဲတန်းရှည်ဆိုင်ခန်းတွေရှိပေမယ့် ပွင့်လင်းရာသီ မဟုတ်လို့ ဆိုင်တွေ အားလုံးပိတ်ထား တာပါ။
တယ်ပင်စခန်းရောက်ရင် ကိုးခန်းဇရပ်မှာ ခေတ္တခဏ နားနေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီစခန်းက သွပ်မိုး ပျဉ်ကာ တထပ် အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး သံဃာတော် အနည်းငယ်လည်း သီတင်း သုံးပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ ဆရာတော် ဦးဒေ၀ိန္ဒတပါးသာ သီတင်းသုံးနေထိုင်တယ်။ ဆရာတော် ဦးဒေဝေဒ က “ကျုပ်လည်း တောင်ပေါ်(ဇလုံတောင်ပေါ်) နဲ့ တောင်အောက် (တည်ပင်စခန်း) သွားနေ ရတာပဲ။ တယ်နှစ်တွေ လာပြီး ဖောက်ကြတဲ့ သူတွေက ရှိတယ်။ အခုလို မိုးတွင်းဆိုရင် အလှူရှင်တွေ လှူ ထားတာလေး တွေ ခြိုးခြံ စားနေရတာပဲ” လို့ မိန့်ပါတယ်။
တယ်ပင် စခန်းက လှမ်းမျှော်ကြည့် လိုက်ရင် ဇလုံတောင် ထိပ်မှာ ရွှေရောင် ၀င်းဝင်း စေတီတော်ကို ဖူးတွေ့ ရနိုင် ပါတယ်။
ဇလုံတောင် စေတီအနီးမှာ တောင်ပေါ်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပြီး သံဃာတော် အနည်းငယ် သီတင်းသုံး နေထိုင် ကြတာပါ။ နှစ်စဉ် နှစ်ဆန်း (၁) ရက်နေ့တိုင်း ဒုလ္လဘပွဲ ရှိပြီး ဒေသခံတွေ သာမက အခြားမြို့ရွာတွေ ကပါ ဒုလ္လဘ လာဝတ် ကြသူတွေ ရှိပါတယ်။
မနှစ်က ဒုလ္လဘ သံဃာ အပါး ၅၀ နဲ့ သီလရှင် ၁၅ ပါး လာရောက် ၀တ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ စေတီတော်ရဲ့ တောင်ဘက် ၂ မိုင် အကွာမှာ တောင်ထိပ် ကျောက်ဖျာကြီးပေါ်မှာ တည်ထား ကိုးကွယ်တဲ့ ကျောက်မဏ္ဍပ် ဘုရား တည်ရှိတယ်။ ကျောက်မဏ္ဍပ် ဘုရားကိုလည်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားရောက် ဖူးမြော်နိုင် ပါသေးတယ်။
မိုးတွင်း ကာလ ဆိုပေမယ့် ရာသီဥတု ကြည်ကြည် လင်လင် ရှိတဲ့ နေ့တွေမှာ ဘုရားဖူးရင်း အပန်းဖြေ ခရီး အဖြစ် လည်း သွားချင် ကြတယ် ဆိုရင် ဗန်းမောက်မြို့က ဇလုံတောင်ကို သွားရောက် လည်ပတ်ဖို့ ညွှန်းဆို ချင်ပါတယ်။
သဘာဝ အရိုင်းဆန်ဆန် လှနေတဲ့ ဇလုံတောင်ကို ခရီးသွားတွေ အသွားအလာ ကျဲနေသေးလို့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးသေးဘူးလို့ ဆိုရပါမယ်။ မြို့ပြရဲ့ မွန်းကျပ် မှုတွေ အောက်က ဖြေဖျောက် ဖို့ရာ တောတွင်း ခရီးတစ်ခုလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/07/18/118510.html
ကဏ္ဍ မြန်မာ့ပုံရိပ်များ, မြန်မာ့အလှ, ဆောင်းပါး
အုတ် ကျစ် ကျော် ဧ မန္တလေး
ရှေးမြန်မာ ပညာ ရှိတွေဟာ သမိုင်းမှာ အထင်ကရ မှတ်သား ရမယ့် အရာတွေ ကိန်းဂဏန်း အရေ အတွက်နဲ့ တွဲဖက် ဖော်ပြပြီး နှောင်းလူတွေ မှတ်သားလို့ လွယ်အောင် စာချိုးခဲ့ကြ မှတ်သားပေး ခဲ့ကြ တတ်ပါတယ်။ ဒီိလို ကိန်းဂဏန်းနဲ့ စာချိုး ဖေါ်ပြခြင်း ခံရတဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။
ဒီလို ကိန်းဂဏန်းနဲ့ စာချိုးပြီး ဖေါ်ပြ ခံရတဲ့ မြို့တွေထဲမှာ ကျမတို့ရဲ့ ရှေးဟောင်း မြို့တော် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မန္တလေးလည်း တစ်ခု အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးကိုကြတော့ “အုတ်ကျစ်ကျော်ဧ” မန္တလေး ဆိုပြီး မှတ်သားစေ ခဲ့ပါတယ်။ မန္တလေး မြို့တည် နန်းတည် နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။
“လှည်းဝန်ရိုးသံ တညံညံ” ဘုရာဘုရားပေါင်း၊ “သဇင်ပန်းခိုင် တမြိုင်မြိုင်” ရခိုင်ဘုရားပေါင်း စတဲ့ ရွတ်ဆိုရလွယ်ကူတဲ့ စာချိုးလေးတွေနဲ့ အဲဒီဒေသတွေမှာ ရှိကြတဲ့ ဘုရားစေတီအရေအတွက်ကို မှတ်သားစေတဲ့ ဒီစာချိုးလေးတွေကြောင့်လည်း ကျမတို့ဟာ အလွယ်တကူ မှတ်သားလို့ လွယ်ကူစေခဲ့ပါတယ်။ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်မှာ သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့တဲ့ လက်ရှိကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံး မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးဆိုရင်လည်း “မင်းဖြူမှန်မှန်ပြော” ဆိုတဲ့ စာချိုးလေးနဲ့ သွန်းလုပ်ထားတဲ့ ကြေးပိသာအလေးချိန်အရေအတွက်ကို မှတ်သားထားကြရပါတယ်။
ဒီိလိုမှတ်သားတဲ့နည်းဟာ မြန်မာ့ နက္ခတဗေဒ အက္ခရာ နေ့နံနည်းနဲ့ မှတ်သားတယ်လို့ပဲ အလွယ်ပြောရမှာပါ။
မြန်မာ့နေ့နံတွေဖြစ်တဲ့ တနင်္ဂနွေကအစ စနေအဆုံး နေ့နံအလိုက် မြန်မာအက္ခရာတွေကို အတွဲလိုက်သတ်မှတ်ပေးထားပြီး။ အဲဒီလိုပဲ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုလည်း သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း စာချိုးလေးတွေမှာ ထည့်သုံးထားတဲ့ အက္ခရာတွေကို ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ ဖလှယ်ယူနိုင်အောင် ဆန်းသစ်တီထွင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ မြောက်ဘက် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသကို မိုင်ပေါင်း ၄၀၀ လောက် ခရီးနှင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုတွေ ထွန်းကားရာ၊ ကုန်ဘောင်မင်းဆက် နောက်ဆုံး မင်းနေပြည်တော် ရတနာပုံ မန္တလေးမြို့တော်ကို ရောက်လာပါပြီ။
ရန်ကုန် မန္တလေး အဝေးပြေးဘတ်စ်ကားကြီးတွေက အများအားဖြင့် ညပိုင်းမှာပဲ မောင်းနှင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ လမ်းဘေးဝဲယာ ဒေသရှုခင်းတွေကို မြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့ နေ့ခင်းပိုင်း ပြေးဆွဲတဲ့ကားကို ရွေးပြီး စီးခဲ့ပါတယ်။ အခု မန္တလေးကို ရောက်ပြီဆိုတော့ ဘတ်စ်ကားစီးချိန်က ၈ နာရီလောက် ကြာခဲ့ပါပြီ။
ကားဂိတ်ကိုရောက်တာနဲ့ တခြားမြို့တွေနဲ့ မခြား မြင်တွေ့မယ့် မြင်ကွင်းတခုပါပဲ။ ခရီးသည်ရဖို့ ပြေးပြီး စောင့်ကြိုနေကြတဲ့ အငှားယဉ်မောင်းသမားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးမြေမှာ ကျမ ခြေချမိပါပြီ။ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက မြန်မာ့ရှေးဘုရင်တွေ အခြေချရာ နေရာ၊ ရတနာပုံ ရေနန်းတော်ကြီးရှိရာနေရာ .. သီပေါဘုရင် ပါတော်မူရာ နေရာ … ဒီဒေသမှာ ကျမအတွက် လေ့လာစရာတွေ ကုန်ဆုံးနိုင်လိမ့်မယ်တောင် မထင်မိခဲ့ပါဘူး။
မန္တလေးတောင်ပေါ်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ အရောင်တလက်လက် တောက်ပနေတဲ့ မှန်စီရွှေချလေးဒေါင့်တိုင်ကြီးတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘုရားတန်ဆောင်း ကျောင်းဆောင်ကြီးတွေကို တွေ့ကြရမှာပါ။
မြန်မာမှု အနုပညာလက်ရာ မှန်စီရွှေချ ပန်းကွက်ကြားတွေနဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါမှုတွေ၊ ဘာသာတရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုကိုလည်း ကျမ ခံစားမိပါတယ်။
ဘုရားဖူးလာသူတွေ ကုသိုလ်ယူသူတွေကလည်း နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ စည်ကားနေပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ နေရာတခုရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် ပေါ်လွင်နေပါတယ်။
ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေရဲ့ သဒ္ဒါထက်သက်မှုနဲ့အတူ အလှူအတန်းပေးထားကြတဲ့ ကမ္ဗည်းမှတ်တမ်းတွေကလည်း အများအပြားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ကျမ မန်းတလေးတောင်ပေါ်မှာ လျှောက်သွားရင်းနဲ့ တွေ့တာက ၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လက ဗြိတိသျှဝေလမင်းသားရဲ့ ဂေါ်ရခါးတပ်ကနေပြီးတော့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေကို စစ်အောင်တဲ့အနေနဲ့ ရူပီး ၂၅၀၀ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ကမ္ဗည်းဆိုင်းဘုတ်လေးကို တွေ့ရပါတယ်။ တဖက်မျက်နှာမှာ ဗမာလို ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ဟိုဘက်မှာဆိုရင်တော့ သူတို့ ဂေါ်ရခါးတပ်ရဲ့ တံဆိပ်ရယ် ကမ္ဗည်းရေးထိုးထားတာကိုလည်း တွေ့ရပါမယ်။
မန္တလေးတောင်ဆိုတာ မြေပြင်အထက် ပေပေါင်း ၅၀၀ ကျော်သာရှိနေပေမယ့် အရှေ့ဘက် ရှမ်းရိုးမတောင်ကြီးကိုလည်း ရှုမျှော်မဆုံး တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်မှာတော့ ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းကြီးနဲ့ တောင်ဘက်မှာတော့ မန္တလေးမြို့တော်ကြီးကို အပေါ်စီးကနေ အုပ်မိုးကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်နဲ့အတူ ပြောင်းလဲလာတဲ့ မန္တလေးမြို့ရဲ့ လူနေအိမ်တွေ၊ နန်းတော်မြို့ရိုးကြီးကိုလည်း တွေ့ကြရမှာပါ။
ဘုရားစေတီပုထိုးတွေ ပေါများလှတဲ့ မန္တလေးတောင်ဟာ မြို့တော်ကြီးရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေနဲ့အတူ ရှေးဟောင်း ရာဇ၀င်တွေ၊ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ ပြည့်စုံရာ ဌာနေတခုလည်း ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
မန်းတလေးတောင်သမိုင်းရဲ့ ၇ ဦးမြောက် ဘုရားဒါယကာလို့ ဆိုကြတဲ့ ရသေ့ကြီး ဦးခန္တီဟာ မန်းတလေးတောင်အကြောင်း ပြောရင်တော့ မပါမဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ ပြောရမှာပါ။
ရသေ့ကြီးဦးခန္တီဟာ မြန်မာပြည်အနှံ့ သာသနာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတွေအများအပြားကို ဦးဆောင်တည်ဆောက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၂၆၉ ခုနှစ်ကစလို့ မန္တလေးတောင်ကို ရောက်လာပြီး ဘုရားစေတီ အဆောက်အအုံတွေကို ပြုပြင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တာကြောင့် မန္တလေးတောင် ရသေ့ကြီးလို့တောင် ပြောနေကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မန္တလေးတောင်ပေါ်မှာ လာရောက်သူတိုင်း သွားကြည့်လေ့ရှိတဲ့ မွေကြီးနှစ်ကောင် ရုပ်ထုတွေကိုလည်း တွေ့နိုင်မှာပါ။
ဒီ မန္တလေးတောင်ပေါ်ကို လာရောက်ကြတဲ့ ဘုရားဖူးခရီးသွားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် မြွေကြီးနှစ်ကောင်ဆီကိုလာပြီးတော့ အလှူဒါန ကုသိုလ်ပြုကြတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒီ မြွေကြီးရဲ့ ပါးစပ်အတွင်းမှာ ဒီမြွေကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကိုသပ်ပြီးတော့မှ အဓိဌာန်ပြုဆုတောင်းတာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။
ရှေးအခါက မန္တလေးတောင်ပေါ်မှာ ထူးထူးခြားခြားရှိခဲ့ဖူးတဲ့ မြွေကြီး ၂ ကောင်ရဲ့ အကြောင်းကတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ထင်ကြေးဇာတ်လမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ မြွေကြီး ၂ ကောင်ကြောင့် မန္တလေးတောင်မှာ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့ စည်ကားစေခဲ့ပါတယ်။ မြွေကြီးတွေမရှိတော့တဲ့နောက် ရသေ့ကြီးဦးခန္တီကပဲ မြွေကြီးတွေရဲ့ ရုပ်ပုံကို သံနဲ့သွန်းလုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့် ဒီနေ့အချိန်အထိ လေ့လာကြည့်ရှုစရာအဖြစ် ကျန်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်ရာဇ၀င်တွေထဲက သမိုင်းကြောင်းတွေနဲ့အတူ မန္တလေးတောင်ပေါ်မှာ လေ့လာစရာအများအပြား ကိုလည်း တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရတနာပုံနေပြည်တော်ကြီးဖြစ်လာမယ့် ဗုဒ္ဓဘုရားဗျာဒိတ်တော်အကြောင်းနဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ထုလုပ်ပုံဖေါ်ခဲ့ကြတဲ့ စန္ဒမုခီ ဘီလူးမရုပ်တုကြီးလည်း ရှိနေပါတယ်။
သာသနာနှစ် ၂၄၀၀ အကျော်မှာ သာသနာပြု မင်းတပါး ထွန်းကားလာမယ့် ဗျာဒိတ်တော်နဲ့အတူ ရတနာပုံနေပြည်တော်ကြီးဟာ မင်းတုန်းမင်းကြီးလက်ထက်မှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးတည်နေရာနဲ့ မြို့သစ်တည်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို စာရေးဆရာ ဆူးငှက်က အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“အပူပိုင်းတကယ့်ကို ဖုံထူ နေပူတဲ့နေရာကြီးမှာ ဘာကြောင့် မြို့သစ်တည်တာလဲပေါ့။ ဒီမြို့သစ်တည်တဲ့ ကာလ ရွေးချယ်မှုက သူထီးနန်းက အမရပူရမှာ ထီးနန်းစံခဲ့တယ်။
အောက်မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလိပ်က သိမ်းထားတယ်။ သူပိုင်တာ အထက်မြန်မာပြည်ပဲ ပိုင်တယ်။ အဲတော့ အထက်မြန်မာပြည်မှာ ထီးနန်းအသစ် ပြန်တည်မယ်ဆိုရင် ဒီနေရာက လွဲလို့ ဘယ်နေရာမှာမှ မတည်နိုင်ဘူး။ ရွေးချယ်ဖို့က ဒါပဲ အဲတော့ ဒီနေရာက လွဲလို့ အရှေ့ဘက်ကြည့်လိုက်တော့ သူမြို့တည်မယ့်နေရာ ပေါ့ဗျာ
ကြည့်လိုက်တော့ အောင်ပင်လယ်ကန် ရှိတယ်။ အောင်ပင်လယ်ကန်ဆိုတာက အခုသာ သာမန် လယ်ကွင်းတွေပဲ ရှိခဲ့တာကိုး အဲဒီ ကာလတုန်းက အောင်ပင်လယ်ကန်ဟာ အလျား ၇မိုင်နဲ့ အနံ ၃မိုင်လောက် ရှိတဲ့ကန် ပုဂံခေတ် ကတည်းက ဆယ်ခဲ့တဲ့ ကန်ကြီး တကယ့်ကို ရေတွေ အပြည့်နဲ့ ကန်ကြီး တစ်ခါ မန္တလေးတောင်ရဲ့ မြောက်ဘက်မှာ နန္ဒာကန် သူကလည်း အောင်ပင်လယ်ကန်နဲ့ အလားတူ ဆယ်ခဲ့တဲ့ ကန် ဒီနှစ်ကန် ကလည်း ဘယ်လောက် နာမည်ကြီးလည်း ဆိုရင် ရှေ့တုန်းက မန္တလေး သီချင်းတွေထဲမှာကို စပ်ခဲ့တဲ့ဟာ တစ်ခါ တောင်ဘက် ကြည့်လိုက်တော့ ရှိပြီးသား တောင်သမန်အင်း ရှိတယ်။
နောက်တစ်ခါ ဇောင်းကလောကန်ဆိုတာ ရှိတယ်။ အခု တစ်သိန်းအင်းဆိုတာ ရှိတယ်။ နောက် အနောက်ဘက်က ဧရာဝတီမြစ် ရေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ နေရာမှာ တည်ခဲ့တာ တည်ပြီးတော့ သူ့ နည်းသူဟန်နဲ့ မြောင်းတွေ ပြန်ဖောက်ပြန်ရော တောင်မြောက် မြောင်းတွေ ဖောက်တယ်။ အရှေ့မြောက် မြောင်းတွေ ဖောက်တယ်။
သူရဲ့ မြို့တော်ကြီးကိုလည်း ပတ်ပတ်လည်မှာ ကျုံးနဲ့ ပတ်လိုက်ပြန်တယ်။ ဒီလိုတည်ခဲ့တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူနေမှု စရိုက်နဲ့ အသွားအလာ ကျွန်တော်တို့ ရိုးရာ ဓလေ့နဲ့ အကုန်လုံးကို ဆက်စပ်ပြီးတော့ ရှိနေခဲ့တာကိုး”
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၂၁ ခုနှစ်ကစလို့ မင်းတုန်းမင်းကြီး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ရတနာပုံမြို့သစ်ကြီးဟာ လေးဘက်လေးတန် တမိုင်ကျော်ရှည်တဲ့ အုတ်ရိုးကြီးတွေနဲ့ ဒီနေ့ အထင်အရှား တွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
စတုရန်းပုံမြိုရိုးကြီးနဲ့ နန်းတော်ကြီးအပါအ၀င် လူနေရပ်ကွက်တွေဟာလည်း စတုရန်းပုံ အကွက်ချပေးထားပုံတွေဟာလည်း မြို့ရဲ့ အပေါ်စီးကနေကြည့်ရင် အထင်အရှား တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ဟာ နေရာဒေသ အချက်အခြာကျသလို ဒီနေ့အချိန်ထိ ထင်ရှားနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဈေးချိုတော်ကြီးဟာလည်း ထူးထူးခြားခြား ရှိနေပါတယ်။
ဒီဈေးချိုတော်ကြီးဟာ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ဈေးချိုတော်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်ကာလကြာညောင်းလာတာနဲ့အမျှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ ခေတ်သစ်ဒီဇိုင်းအမြင်နဲ့ မြင်တွေ့ရမယ့် ဈေးချိုတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဈေးချိုတော်ကြီးအတွင်းမှာတော့ ငပိ ငါးခြောက် ကုန်မျိုးစုံ ပိုးထည်ချည်ထည် အစရှိသဖြင့် ရောင်းချတယ်ပေါ့နော် ဒါပေမယ့် ဒါပေမယ့် အရင်ခေတ်ကနဲ့ မတူတော့ပဲ … ဒါကတော့မန္တလေးဆေးချိုတော်ရဲ့ မနက်ခင်းမြင်ကွင်းလေးပါ။
မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဈေးချိုတော်ကြီးဟာ မကြာခဏဆိုသလို မီးလောင်ခံခဲ့ရတာကြောင့် အင်္ဂလိပ်လက်ထပ်မှာ ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။
မြန်မာ့ နေ့နံမှတ်သားနည်းနဲ့ပဲ အုတ်ကာသွပ်မိုးဆိုပြီး ၁၂၆၅ ခုနှစ်မှာ ပြုပြင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဈေးချိုတော်ကြီးကို အီတလီ ဗိသုကာဆရာကြီးက ပုံစံဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့က ဈေးကြီးတခုရဲ့ ပုံစံလို့လည်း မှတ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
အခုတော့ ခေတ်ကာလအလိုက် ပြုပြင်မှုတွေနဲ့အတူ ဈေးချိုတော်ကြီးဟာ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားပြီလို့တောင် ပြောနေကြပါပြီ။
ခေတ်ဟောင်း ရောင်းဝယ်မှု ဓလေ့တွေကလည်း ကာလရွေ့လျားမှုနဲ့အတူ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။ ဒီအကြောင်းတွေကိုလည်း စာရေးဆရာဆူးငှက်က ဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်။
“မင်းတုန်းမင်း မန္တလေးမြို့ ပန္နက်တည်ကတည်းက ဈေးချိုတော်ဆိုတဲ့ နေရာတဲ့ သေချာ ပန္နက်ရိုက်ပေးခဲ့တာ။ ဒီမှာ ဈေးလာရောင်းချကြတယ်။ ဈေးရောင်းချတဲ့အခါ တူရာအစုကိုပဲ ရောင်းတာ။ ဒီနေရာ ငါးပိ ငါးခြောက်တန်း ဒီနေရာ ဆန်ရောင်းတာ။ ဒီနေရာ သစ်သီးရောင်းတာ ဒီနေရာ ရွှေရောင်းတာ အစရှိသဖြင့် ဒီလိုတွေ သွားတာကိုး။
သူက ကျေးလက်နဲ့လည်း တလျှောက် ဆက်သွယ်တဲ့ ပုံစံဖြစ်တော့ ဈေးချိုတည်တာတောင်မှ ဘယ်နေရာ တည်လည်းဆိုတော့ ဘိုးတော်ဘုရာ ခေတ်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ ရွှေတစ်ချောင်းမြောင်း ရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ တည်ခဲ့တာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီမြောင်းက အရင်တုန်းက လှေတွေ သမ္မန်တွေ သွားလို့ရတဲ့မြောင်း ဒါလူလုပ်တဲ့မြောင်း အဲဒီလှေတွေ သမ္မန်တွေက ဘယ်သွားလည်း ဟိုမြောက်ဘက်က မတ္တရာ နယ်တကြောသွားတာ။ အဲဒီနယ်က ဘာလဲ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စတဲ့ သစ်သီး တော်တော်များများ ထွက်တဲ့နယ်။ နောက် ဆန်းစပါးထွက်တယ်။ အဲတော့ မြို့ရဲ့ ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ရေး အတွက် အသုံးတည့်သော လမ်းပန်း ရေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဈေးကိုတည်ပေးတာ။ ဒါမျိုးတွေ သူတုိ့ခေတ်ရဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်နဲ့ တည်ခဲ့တာဟာ”
မန္တလေးမြို့ရဲ့ ဈေးချိုတော်အကြောင်းကို ပြောလို့ ရှိရင် ဈေးချိုနာရီစင်ကြီးကိုတော့ ထားခဲ့လို့ မရပါဘူးရှင်။ ဒီဈေးချိုနာရီစင်ကြီးဟာ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဈေးချိုတော်နဲ့ အတူတွဲပြီးတော့ ဆောက် ခဲ့တယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဈေးချိုတော်ကြီး အရင်ဆောက်ပြီးမှ ဈေးချိုနာရီကို ဆောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးချိုနာရီစင်ကြီးကို ဘာဖြစ်လို့ ဆောက်ခဲ့တာလဲ ဆိုလို့ ရှိရင် ဒီဝီတိုရီယ ဘုရင်မရဲ့ နန်းသက် နှစ်၆၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဒီအင်္ဂလိပ်တွေက ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဈေးချို နာရီစင်ကြီး ဖြစ်တယ်။ အရင်ခေတ်က ဆိုလို့ ရှိရင် လူတိုင်း လူတိုင်းဆီမှာ နာရီ မဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ဈေးချိုနာရီစင်ကြီးဟာ အရမ်းကို အသုံးဝင်တယ်လို့ သိရတယ်ရှင့်။
မန္တလေးဈေးချိုတော်နဲ့ နာရီစင်ကြီးဟာ နန်းမြို့ရိုးရဲ့ အနောက်တောင်ဒေါင့် ဘယ်မှာ တည်ထားတာဖြစ်ပြီး မြို့တော်ရဲ့ ဗဟိုအချက်အခြာနေရာ လို့လည်း ပြောနိုင်ပါတယ်။
ရှေးခေတ် ရတနာပူရ အင်းဝဘုရင်မင်းဆက်ကနေ ဒေသရွေ့လျားပြီး ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် အမရပူရမြို့သစ်တည်ပြီးနောက် မင်းတုန်းမင်းကြီး လက်ထက်မှာတော့ ရတနာပုံ မန္တလေးမြို့သစ်ကြီးအဖြစ် ဆင့်ကဲ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဒီမှာမြင်တွေ့ရတာကတော့ သုဓမ္မာဇရပ်ရဲ့ ဇရပ်အဆောင်၁၁ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုဓမ္မာဇရပ် ဆိုတာကတော့ ရတနာပုံခေတ် မန္တလေးမြို့ကိုတည်ခဲ့တဲ့ မင်းတုန်းမင်းကြီးရဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းးတုန်းမင်းက ဒီသုဓမ္မာဇရပ် တွေကို ဆောက်လုပ်လှုဒါန်းခဲ့တာ ဆိုလို့ ရှိရင် နယုန်လမှာ သံဃာတော်တွေ စာပြန်ပွဲတော် လုပ်ဖို့အတွက် သုဓမ္မာဇရပ် အဆောင်တွေကို ဆောက်လုပ် လှုဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ အဓိက ကတော့ စာပြန်ပွဲတော် လုပ်ဖို့အတွက် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေက နယုန်လမှာဆိုလို့ ရှိရင် ဒီသုဓမ္မာဇရပ်ကို လာပြီးတော့ စုဝေးတယ်ပေါ့နော်။ အဲလိုစုဝေးတဲ့ သံဃာတော်တွေနောက်ကို လိုက်လာတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ တဲဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ ဒီသုဓမ္မာဇရပ် တွေကိုလည်း ဆောက်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ စပြီးဆောက်တုန်းက ဒီသုဓမ္မာဇရပ် အဆောင် ၃၃ ဆောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ခေတ်ကာလ ကြာညောင်းလာတဲ့နဲ့ အမျှ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေရယ် မီးဒဏ်ခံရတာတွေကြောင့် အခုဆိုရင် ၁၃ ဆောင်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ပျက်စီးယိုယွင်းသွားတဲ့ ဇရပ်တွေ ရှေ့မူလတိုင်း မပျက်စီးဘဲ ရတနာပုံခေတ်က လက်ရာအတိုင်း ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇရပ်ကို ဆောက်ထားတာဆိုလို့ ရှိရင် အင်မတန်ထူးခြားတယ်ပေါ့နော်။ သံအကူကရိယာ မပါဘဲနဲ့ သစ်သားအချင်းချင်း ဖောက် ထွင်းပြီးတော့မှ ချိတ်ဆက် ဆောက်လုပ်ထားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေတ်အဆက်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးသည့်တိုင် မပျောက်မပျက် တည်ရှိနေခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြ်ို့အကြောင်းကို ဆရာဆူးငှက်ကပဲ အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ ရှေ့ဟောင်း မြို့တော်ကြီးတွေထဲမှာ အကောင်းပတိ နီးနီး ကျန်ရစ်တာ မန္တလေး တစ်မြို့တော်ပဲ ကျန်ရစ်တာပေါ့နော်။ မြို့တည်ပြီးတော့ မြို့ကြီး လုံးဝ ပျက်သုဉ်းသွားတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ဒဏ် ခံလိုက်ရလို့ မြို့ရဲ့ အပျက်စီးဆိုတာပဲ ရှိခဲ့တယ်။
အရင်ရှိခဲ့တဲ့ လူနေမှု စရိုက် အရင်ရှိခဲ့တဲ့ လူနေမှု ပုံစံနဲ့ အရင်ရှိခဲ့တဲ့ မင်းခန်းမင်းနားတွေ အကုန်လုံးက မပျောက်ပျက်ခဲ့ဘူး။ ဒါစစ်ကြောင့်မုိ့တော်တော်များများ ပျက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လူနေမှု စရိုက်က အဲကာလ မပျက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။
အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ရှေ့ဟောင်း မြို့တော်ကြီးတွေရဲ့ ဗိသုကာ ပုံစံကို လေ့လာမလား လေ့လာမယ်ဆိုရင် မန္တလေးက အထင်ရှားဆုံးပဲ။ ရပ်ကွက်တွေ ဖွဲ့စည်းပုံတွေကြည့်ရင် တကယ့်ကို ဗိသုကာ ပုံစံစစ်စစ် မန္တလေးက လေးထောင်ပုံစံနဲ့ ဖွဲ့ခဲ့တာ။ ဒီဝန်းကြီးတွေက အရင်က ဘယ်လိုပုံစံ နေခဲ့ကြလဲ အခုဘယ်လို ဖြစ်သွားပြီလဲ ဒီအပြောင်းလဲ အရင်က နေခဲ့ကြတာ ကျေးလက်ပုံစံကို နေခဲ့ကြတာ။
ပြောကြစို့ဆိုရင် စည်းရိုးမရှိဘူး တစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ် ဝန်းမရှိဘူး။ ကျေးလက်ပုံစံ အလယ်ခေါင်မှာ ဝန်းရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ အရှင်သခင် ရဲ့ ဘုရင်ရဲ့ ပေးသနားခြင်း ခံရတဲ့ မင်းညီမင်းသား ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဝန်ကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်စော်ဖွား ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူက နေပြီးတော့ ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာက သူရဲ့ အချွေရံတွေ ဒီလိုနေကြတာ။
အဲဒီကနေမှ ပြောင်းသွားတာ ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ လက်ရှိမြို့ပြပုံစံ ဖြစ်သွားတဲ့ အခါမှာကြတော့ ဒီဝန်ကြီးထဲမှာ ပတ်ပတ်လည်မှာ မျက်နှာစာတွေမှာ အိမ်တွေ တိုက်တွေက နေရာယူတော့ အတွင်းမှာ ပြွတ်သိပ်ညှပ်နေတဲ့ အစုအဖွဲ့တွေ အကုန် ဖြစ်ကုန်တယ်။ ဖြစ်ကုန်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပုံစံအရလည်း မသန့်ရှင်းဘူး။ နောက်တစ်ခုက မီးရေးထင်းရေးအရလည်း စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်သွားတယ်။
မြို့ပြပုံစံ ပျက်သွားတယ်။ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းမှာ စပျက်တယ်။ ပျက်သွားတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း ဘာဖြစ်သွားလည်း ဆိုတော့ အရင်လူမှု ဆက်ဆံရေး ပုံစံတွေပါ အကုန်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ”
ဒါကြောင့်လည်း မန္တလေးမြို့တော်တည်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသဟာ ရှေးခေတ် မင်းဧကရာဇ်တွေ အုပ်စိုးရာ ရာဇဌာနီဖြစ်လို့ နေပါတယ်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလ စစ်ဘေးဒဏ်တွေ၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှုဒဏ်တွေ အလူးအလဲခံခဲ့ရဖူးတဲ့ ရတနာပုံ မန်းတလေးမြို့တော်ဟာ လဲရာကနေ ရုံးထခဲ့ရပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူမှုစီးပွားပုံစံတွေကလည်း အပြောင်းအလဲတွေနဲ့အတူ ခြားနားလာခဲ့ပါပြီ။
မန္တလေးမြို့တော်ဟာ မြန်မာ့ ပန်းဆယ်မျိုးလက်ရာ၊ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာများစွာ ထွန်းကားရာဒေသကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အုတ်ကျစ်ကျော်ဧ မန္တလေး၊ အင်ကြင်းကြာအုံ ရတနာပုံ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ အခုဆိုရင် နှစ်ပေါင်း တစ်ရာ့ငါးဆယ်တောင် ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/13696
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, May 01, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ မြန်မာ့ပုံရိပ်များ, မြန်မာ့အလှ
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ဖွယ် ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူး ခရီး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွား အစီစဉ်တွေ ထဲမှာ ဘုရားဖူး ခရီးသွား အစီစဉ်ဟာ တခြား ထူးခြား ဆန်းသစ် လှပတဲ့ သဘာဝဒေသ ခရီးစဉ်တွေ နည်းတူ အရေးပါတဲ့ ခရီးစဉ် အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲက ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးခရီးစဉ် အကြောင်း မိတ်ဆက် ပေးလိုပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဟာ မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ထိုမြို့နယ်ထဲက ပေါင်းလောင်းတောင်ကြောပေါ်မှာ ရှိပါတယ်။ ခရီးစဉ်အစကိုပြောပါဆိုရင် ကျိုက်ထိုမြို့ တောင်ပေါ်ခရီး မော်တော်ယာဉ်စခန်းက စရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာက ကင်ပွန်းစခန်းလို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ကားမောင်း ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ မောင်းပြီး အင်မတန် ကောင်းတဲ့ စက်အင်ဂျင်တပ် မော်တော်ယာဉ် များနဲ့ တောင်ပေါ် တက်ကြရမှာပါ။
ဒီနေရာကနေ ခရီးသည်လိုင်းကားနဲ့ တက်မယ်ဆိုရင် ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားရင်ပြင်အနားကို ၄၅ မိနစ်ခန့်နဲ့ ရောက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တောင်ပေါ်တက်မယ်ဆိုရင် ဘုရားကိုရောက်ဖို့ လမ်း နှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ တစ်လမ်းက ကားနဲ့တက်တဲ့ လမ်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်လမ်းကတော့ ခြေလျင်လမ်းခရီး ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသည်တချို့က ကားနဲ့တက်ကြပြီး တချို့ကတော့ ခြေလျင်တက်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိုးအကုန်ဆောင်းဝင်စ ဖြစ်တာကတကြောင်း တောင်ခြေမြို့ကလေးတမြို့ ဖြစ်တာမို့လည်း ကျိုက်ထိုမြို့ ကလေးက အနည်းငယ်တော့ ချမ်းအေးစ ပြုနေတာတွေ့ရပါတယ်။ မြို့လည်တ၀ိုက်နဲ့ ကားဆိပ်မှာ ဘုရားဖူး ခရီးသည်တွေ စည်ကား နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
တောင်ပေါ်တက်မယ့် ခရီးသည်တင်ကားပေါ်ကိုတက်တော့ အလုအယက်တက်ကြ နေရာဦးကြရပါတယ်။ ချော်မလဲ ချော်မကျအောင်လည်း ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ ခရီးသည်အကန့်အသတ်နဲ့ စီးရတာဖြစ်လို့ နေရာရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒီလိုမှ အလုအယက် နေရာမဦးလို့ နောက်ကျနေမယ်ဆိုရင် နောက်ကားကို စောင့်စီးကြရမယ့် သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စီးမယ့်ကားပေါ်မှာ ခုံတန်းတစ်တန်းကို လူခုနှစ်ယောက်စီးလို့ရပါတယ်။ ကားနောက်ခန်းက အမိုးအကာတော့မပါပါဘူး။
ကားခက ခရီးသည်တစ်ယောက် ၂၅၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။ ကားခေါင်းထဲမှာ စီးမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ ကားခေါင်းကစီးမယ်ဆိုရင်တော့ ၃၀၀၀ ကျပ်ပေးစီးရပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ခရီးသည် ၅၀ ကျော်ခန့်နဲ့ လူပြည့်သွားတာကိုကြည့်ပြီး ဒီမော်တော်ယာဉ်စီးပွားရေးဟာ တော်တော်လေးအကျိုးရှိတဲ့ စီးပွားရေးလို့ ပြောနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား တောင်ပေါ်လမ်းခရီးဟာ ဟိုယခင် နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်တုန်းက ဆိုရင် ခြေလျင် ခရီးသာဖြစ်ပြီး လမ်းမှာတစ်ညအိပ်ရတဲ့ ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ကားလမ်းခရီးဖြစ်လာပြီဖြစ်တဲ့အပြင် လမ်းကလည်းကောင်းတော့ တစ်နာရီနဲ့တောင်ပေါ်ရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့ ခရီးဖြစ်လို့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေလှပါတယ်။
ကင်ပွန်းစခန်းကနေပြီး ဘုရားခြေရင်းအရောက် ခုနှစ်မိုင်ခွဲခန့်ခရီးဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ တောင်ပေါ်ဘုရားရဲ့အမြင့်ဟာ ပင်လယ်ရေပြင်အထက် ပေပေါင်း ၃၆၀၀ လောက်မြင့်ပါတယ်။
ကင်ပွန်းစခန်းက ကျွန်တော်တို့ကားထွက်လာ ပြီးပြီးချင်း သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အရင်ဆုံး လူအရေအတွက် စစ်ဆေးတဲ့ ဂိတ်တစ်ခုကို ရောက်ပါတယ်။
ဒီဂိတ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေအရ ခရီးသည်အရေအတွက် စစ်ဆေးတဲ့ဂိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်တက်လမ်းဖြစ်လို့ လမ်းခရီးအန္တရာယ် လုံခြုံရေးအတွက် တိတိကျကျ လိုက်နာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ဂိတ်လွန်တော့ တောင်ပေါ်စတက်ပါတယ်။
လမ်းမှာ ရေမြောင်လေးစခန်းဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ကား ခဏရပ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်က ဆင်းချလာနေတဲ့ကားကို စောင့်ပြီး လမ်းဖယ်ပေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ ကားရပ်ထားတုန်း လမ်းခရီးပြုပြင်ရန် ဆိုပြီး ဖလားကိုင်ပြီးတက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်က အလှူခံပါသေးတယ်။
တောင်အထပ်ထပ်ကို ကျော်ဖြတ်လာပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဘုရားအနီးမှာ ရှိတဲ့ စခန်းကို ကျွန်တော်တို့ ကားက ရောက်လာပါတယ်။ ဘုရားကို ရောက်ပြီလို့ ပြောလို့ရပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဘုရားကုန်းတော်က နည်းနည်းလေး မြင့်တာမို့ အထမ်းသမားငှားဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေက ခြင်းတစ်ခြင်းထဲနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ ရင်ပြင်တော်ပေါ်အရောက် ထမ်းခ ၄၅၀၀ ပေးရပါတယ်။
အထမ်းသမားတွေရဲ့ အခြေအနေကိုလည်း တီးခေါက်ကြည့်ပါသေးတယ်။ ဒီနှစ်က အထမ်းသမား အရေအတွက် များလွန်းလာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထမ်းသမားအဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ရှိတာရယ် တစ်ဖွဲ့မှာ အထမ်းသမား ၃၀၀ ရှိလို့ စုစုပေါင်းအထမ်းသမား ၆၀၀ ရှိတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လည်း အထမ်း လုပ်ငန်းက ယခင်နှစ်တွေလောက်တော့ မကိုက်တော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။
ရင်ပြင်တော်တ၀ိုက်မှာ ဘုရားဖူးခရီးသည်တွေ တော်တော်များပါတယ်။ ဒေသအသုံးအနှုန်း အရပြောရရင် ဆောင်းဝင်စ တောင်ဖွင့်စ ဖြစ်တာမို့ လူတွေ ပိုပြီးစည်ကားနေသလားလို့ တွေးမိပါသေးတယ်။ ခရီးသည် အသီးသီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအဖုံဖုံနဲ့ ရောက်လာကြတာပါ။ ဥပမာ ကျိုက်ထီးရိုးကို သုံးခေါက်အထိ ဘုရားဖူးလာပြီးရင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး ယုံကြည်ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။
ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ရွှေသင်္ကန်းကပ်သူတွေ၊ သစ်သီး၊ ဆွမ်း၊ ပန်းကပ်သူတွေ ဥဒဟိုသွားလာနေကြပါတယ်။ ဒီအထဲက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အလှူဒါနတစ်ခုက ခေါင်းလောင်းလေးတွေမှာ ကိုယ့်နာမည်ရေးထွင်းပြီး ကပ်လှူလို့ရတဲ့ ဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းလောင်းအမျိုးအစား အကြီးအသေးအပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးအမျိုး မျိုးနဲ့ ၀ယ်ယူလှူဒါန်းကြရပါတယ်။
အခုတော့ ကျိုက်ထီးရိုးရင်ပြင်တော်နဲ့ တောင်ပေါ်ဒေသက အရင်နှစ်တွေကနဲ့ မတူပဲ ခေတ်စနစ်ရဲ့ တောင်းဆို မှုအရ အပြောင်းအလဲတွေတော့ ဖြစ်လာနေပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ဒီဘက်ခေတ် ကျိုက်ထီးရိုးက အပြောင်းအလဲတွေ များစွာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုတွေကို မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ အဆောက်အဦးပိုင်း ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကတော့ ကျိုက်ထီးရိုးရဲ့ ထင်သာမြင်သာအရှိဆုံး တိုးတက်မှုတွေတော့ ဖြစ်လာနေ ပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ အခြေခံ အဆောက်အဦး တိုးတက်မှု အပိုင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အပိုင်းတွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာသလိုပဲ အထွေထွေကုန်ကျစရိတ် ကြီးမြင့်မှုတွေကလည်း ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားဖူးတွေ အတွက် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲလေးတွေလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ တည်းခိုနေထိုင်ရေး အခက်အခ၊ဲ ရေအခက်အခဲ တွေက လက်ရှိအချိန်ထိ အဓိက အခက်အခဲတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
မနှစ်ကဆိုရင် ရေလုံးဝ မလောက်ဘူးလို့သိရတယ်။ ခုလည်း ဒီလလောက်အထိတော့ အဆင်ပြေ နေသေးတယ်။ ဒီ ဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းဆိုရင် ရေဟာ အဆင်မပြေချင်တော့ဘူး။ အဓိက ကတော့ ရေပြဿနာ ပါပဲ။ ဒါကလည်း ဘုရားဖူး ဧည့်သည် အရေအတွက် တော်တော်များတာရယ်၊ တောင်ပေါ်ဒေသ ဖြစ်တာကြောင့် အခုလို ရေ ပြတ်လပ်တာပါပဲ။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပွဲကို အမှီပြုပြီးတော့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွေ တိုးလာတာနဲ့ စီးပွားရေး ဆန်မှုတွေကိုလည်း ပိုပြီးတွေ့လာရပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုးရဲ့ ဘုရားဖူးရာသီက သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ကနေ ကဆုန်လပြည့်နေ့ အထိ ၇ လရှိပါတယ်။ အခုလိုအချိန် ရာသီ အဖွင့်မှာတောင်မှ တည်းခိုခန်း စရိတ်တေ၊ွ စားသောက်စရိတ်တွေဟာ ပိုပြီးတော့ ကြီးမြင့်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တည်းတဲ့ တည်းခိုခန်းမှာဆိုရင် နှစ်ယောက်ခန်း တစ်ခန်းကို တစ်သိန်းနှစ်သောင်း ပေးရပါတယ်။ ရေဆိုရင်လည်း ၀ယ်သုံးရတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေက ကျိုက်ထီးရိုးရဲ့ တဖြည်းဖြည်း စီးပွားရေး ဆန်လာတဲ့ အပိုင်းတွေ၊ ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာတွေပါပဲ။
ဘုရားစောင်းတန်းပေါ်မှာ ထမင်းဆိုင် ၁၈ ဆိုင် ရှိပါတယ် ။ ဒီဆိုင်တန်းတွေ မီးမလောင်ခင်တုန်းကဆိုရင် ၀ါးတဲလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်ပြီးချိန်မှာတော့ တာဝန်ရှိသူတွေက ဒီလိုမျိုး ကွန်ကရစ် အဆောက် အဦးတွေ အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထမင်းဆိုင် လေလံဈေးတွေက တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ကြီးမြင့်လာတယ်လို့ ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။
လေလံဈေးက တစ်နှစ်ကို တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ နည်းတာမဟုတ်ဘူး၊ တက်လာတာလည်း တော်တော် များနေပြီ ဆိုတော့လေ အခန်းဈေးကလည်း ဒီပိတ်ရက်လေးတွေပဲ ရှာရတယ်။ ကြားရက်ဆိုရင်တော့ အလကားပဲ။ တနင်္လာကနေ သောကြာ ရက်အထိဆိုရင်တော့ ထမင်းစားအားပေး အလကားတည်းပေ့ါနော်။ ဒီရက်ကတော့ ညီမတို့ ရှာရတာပေါ့။ အဲဒီလေလံစရိတ် သိန်း ၈၀ ကို ဒီရက်မှာ ရှာရတယ်လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
ဒီမှာက ဘုရားဘက်နဲ့ နီးလေလေ ဆိုင်ခန်းစရိတ်က ပိုကြီးမြင့်လေလေပါပဲ။ ခုဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ လေလံဈေးက သိန်း ၁၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် နောက်နှစ်တွေမှာလည်း ဈေးနှုန်းက ဆက်တက် နေဦးမှာပါပဲ။
ဆက်သွယ်ရေးတွေ တိုးတက်လာတော့ လူတိုင်းလိုလို မိုဘိုင်းဖုန်း တစ်လုံးကိုင်နိုင်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီ ကျိုက်ထီးရိုး စေတီမှာတော့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ဘုရားဖူးလာတဲ့ လူတိုင်းမှာ တစ်ဦးကိုတော့ ဖုန်း တစ်လုံးစီ ပါလာမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဖုန်းအားသွင်းဖို့တော့ သူတို့မှာ အခက်အခဲ ရှိမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အတော်များများက ရင်ပြင်မှာပဲ သူတို့တွေ တည်းခိုပြီးအိပ်စက်ကြတယ်။ တည်းခိုဖို့ စရိတ်ကြီးမြင့်တာကြောင့်လည်း တည်းခိုဆောင်တွေမှာ တည်းခိုမှာလည်း မဟုတ်ကြပါဘူး။
ပြီးတော့ တည်းခိုဆောင် အရေအတွက်ကလည်း ဘုရားဖူးအရေအတွက်နဲ့ စာရင် အရမ်းကို နည်းပါးတဲ့ အတွက်ကြောင့် အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ အချိန်ကျရင် အခက်အခဲ ဖြစ်လာမယ်။ ထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဖုန်းအားသွင်းဖို့ ကျတော့လည်း ထမင်းဆိုင်တွေက ခွင့်မပြုထားဘူးလို့ သိရတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူအရမ်းများတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့ ဖုန်းတွေအများကြီးသွင်းမယ်ဆိုရင် ဆိုင်တိုင်း ဆိုင်တိုင်းမှာ မီတာ ကုန်ကျစရိတ်တွေက ရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောကြပါတယ် ။
အဲဒီတော့ ဒီဘက်ခေတ် နောက်ပိုင်းမှာက ဖုန်းအားသွင်းဖို့အတွက် ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ ဆိုင်တွေကလည်း ကျိုက်ထီးရိုးမှာ ဈေးကွက် တစ်ခု အနေနဲ့ ပီပြင်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးကို အားပြည့်အောင်သွင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်ဖုန်းအမျိုးအစားကိုမဆို ငွေ ၅၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။ ကျိုက်ထီးရိုး ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာက ဘက်ထရီ အားသွင်းတဲ့ ဆိုင်ပေါင်း ၁၆ ဆိုင်လောက် ရှိပါတယ်။
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားကို လာရောက်ကြသူတိုင်းလိုလို သွားရောက်ကြလေ့ရှိတဲ့နေရာကတော့ ကျီးပါးစပ်လှိုဏ်ဂူဖြစ်ပါတယ်။ ကျီးပါးစပ်ကို သွားဖို့ဆိုရင် မုဆိုးတောင် ဘုရားလမ်းကနေ ဆင်းပြီးတော့ သွားရမှာပါ။ အဆင်းလမ်းတစ်လျောက်မှာတော့ အမှတ်တရ ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်တွေ ရှိနေပါတယ်။
လာတဲ့လမ်းမှာဆိုရင် အမှတ်တရ ပစ္စည်းဆိုင်ပေါင်း ၄၀ လောက်ကို ဖြတ်သန်းပြီး လာခဲ့ရတာပါ။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကနေ ကျီးပါးစပ် လှိုဏ်ဂူကို မိနစ် ၂၀ ကျော်လောက် အချိန်ယူပြီးတော့ လျှောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျီးပါးစပ် လှိုဏ်ဂူရှိရာမှာ ပရ်ိသတ်တွေ အများကြီး တွေ့ရတယ်။ အားလုံးက ကျီးပါးစပ်ထဲကို အကြွေစေ့တွေ ပစ်ထည့်ပြီး ဆုတောင်းတဲ့ အဓိဋ္ဌာန်တွေ အောင်မြင်ဖို့ဆိုပြီး ဆုတောင်းတာကို တွေ့ရပါတယ် ။
ဒီမှာက အကြွေစေ့ ငါးစေ့ကိုငွေကျပ် ငါးရာနဲ့ ရောင်းပါတယ်။ ဒါကတော့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီးတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အလေ့အထ တစ်ခုလို့လည်း မြင်ပါတယ်။ ဘုရားဖူးတွေကို မေးကြည့်တဲ့ အချိန်မှာလည်း အဓိဋ္ဌာန်အောင်ဖို့ ဒီကျီးပါးစပ်ထဲကို အကြွေစေ့တွေ ပစ်တာလို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောကြပါတယ်။
ကျီးပါးစပ်လှိုဏ်ဂူတော်ကိုလာတဲ့မုဆိုးတောင် ဘုရားလမ်းမှာ နောက်ထပ် ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရတာကတော့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းဆိုင်တွေ အပြင် ဒီဒေသမှာထွက်တဲ့ သစ်မြစ် သစ်ဥတွေကနေ ရရှိတဲ့ ဆေးမြစ်တွေ ရောင်းချတဲ့ ဈေးဆိုင်တွေပါပဲ။
ကျိုက်ထီးရိုး ရဲ့ မနက်ခင်းအချိန်ကို ကျော်လွန်လာပြီး ညဘက် အချိန်ရောက်လာတော့ တောင်ပေါ်လေတွေ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ အထဲမှာပဲ ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေက ရင်ပြင် အပြည့်မှာ နားနေအိပ်စက်ဖို့ နေရာထိုင်ခင်း ပြင်နေကြပါပြီ။
ဒီနေ့မနက်ခင်း အချိန်ကနေ ညပိုင်းအထိ တောင်တက် ကားလမ်းတွေကနေ ရောက်လာကြတဲ့ ဘုရားဖူးဧည့်သည်တွေ အနေနဲ့ကတော့ ကျိုက်ထီးရိုး ရဲ့ညက လှပလို့ နေပါတယ်။
အကြိမ်ကြိမ် ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်ကိုလာရောက်ဖူးမျှော်ဖူးတဲ့ ဘုရားဖူးတွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့ အခါမှာ ခုခေတ်မှာ ကျိုက်ထီးရိုး စေတီတော်ရဲ့ အဆောက်အဦး ဖွံ့ဖြိုးမှု အပိုင်းက တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ဘုရားဖူးတွေကတော့ လူတန်းစားအားလုံးကို အခြေခံပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ အပိုင်းမှာ အားနည်း ချက်တွေ ရှိနေသေးတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားဆိုတာ ကျောက်စွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတစ်ခု ဆန်းကျယ် အံ့သြဖွယ်တင်နေပြီး အဲဒီ တင်နေတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးပေါ်မှာမှ စေတီတစ်ဆူ တည်ထား ကိုးကွယ်ထားတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းလောင်း တောင်ကြောပေါ်မှာရှိပြီး လှပပြန့်ပြောတဲ့ အပေါ်စီးမြင်ကွင်းတွေ၊ လှည့်ပတ် သွားလာ ကြည့်ရှုဖူးမျှော်စရာ ဘုရားစေတီတွေ၊ ဈေးဆိုင်တွေ၊ တည်းခိုခန်းတွေနဲ့ စည်ကား သိုက်မြိုက်လွန်းလို့ မည်သူမဆို နှစ်စဉ်သွားရောက် ကုသိုလ်ယူသင့်ပါတယ်။
Original link - http://mizzimaburmese.com/article/8156
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, December 06, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ရုပ်/သံ-မှတ်တမ်း, မြန်မာ့ပုံရိပ်များ, မြန်မာ့အလှ
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်းက သဘာဝ အလှတရား (ဓာတ်ပုံ)
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း ပင်လောင်း မြို့အနီး နေပြည်တော်-ပင်လောင်း - တောင်ကြီး လမ်းမှ ၄ မိုင် အကွာ စင်ဆင့်ရွာ အနီးရှိ မဖျက်ဆီး ခံရသေးတဲ့ စင်ဆင့် ရေထွက် ၇ ဆင့် ရေတံခွန်ရဲ့ သဘာဝ အလှတရား။
ဓာတ်ပုံ – အာကာမင်း
Original link - http://burmese.dvb.no/archives/98480
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, June 19, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ ဓါတ်ပုံ, မြန်မာ့ပုံရိပ်များ, မြန်မာ့အလှ